पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन हो? लन्डन स्कूल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको यो अध्ययन सन् २०१० देखि २०१२ भित्र सर्वेक्षणमा सहभागी युवावस्थाका तीन हजार जनाको उत्तरमा आधारित छ। शनिबार, फागुन २१, २०७८
यौन आनन्दको ज्ञानले सुरक्षित यौन व्यवहारबारे बुझाउन सकिने: डब्ल्यूएचओ यौन सन्तुष्टिबारेको शिक्षाका आधारमा सुरक्षित यौन व्यवहारको महत्त्व बुझाउने सन्देश प्रभावकारी रूपमा फैलाउन सहयोगी हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)का अध्ययनकर्ताहरूले बताएका छन्। शनिबार, फागुन २१, २०७८
महिला र पुरुषमा देखिने यौन रोगका लक्षणहरु सुरुमै जचाएर पहिचान गरी दुबै दम्पतीले समयमा उपचार गरे यो रोग निको हुन्छ। गर्भवती अवस्थामा गर्भमा रहेको बच्चालाई पनि यौन रोगले असर पार्ने हुनसक्छ। शनिबार, मंसिर २५, २०७८
यौन स्वास्थ्य: ६ जिज्ञासा र उत्तर प्रेमीहरू प्रेम गर्ने बखत एकदम फुर्तिलो र सरसफाई होस् भन्ने चाहन्छन्। फोहोरीपन त आत्मीय सम्बन्धलाई टुुक्र्याउने कारक तत्व बन्न सक्छ। शनिबार, असोज २३, २०७८
किन हुँदैन चाहेको बेला यौन उत्तेजना? रुषहरुमा भने प्रयाप्त समयसम्म लिङ्ग ठाडो र कडा नरहने समस्या आउनसक्छ। पुरुषमा पनि शारिरीक रोग, मद्यपान तथा लागूपदार्थ र औषधि सेवन जस्ता कारणले पनि यौन उत्तेजना नआउने हुन्छ। शनिबार, असोज १६, २०७८
मुटुरोग त​​​​​​​था यौन जीवन टुको पम्प कमजोर भएका बिरामीहरूमा पनि यौन इच्छा कमी तथा यौन सुख नहुन सक्दछ। यसबाहेक उच्च रक्तचाप बढ़ने विभिन्न हर्मोनसँग सम्बन्धित अवस्थाहरू जस्तै थाइरोइडको रोग, मधुमेह, मिर्गौला फेल आदिमा पनि यौन इच्छा घट्न सक्दछ। शनिबार, साउन ९, २०७८
जतिपल्ट सेक्स, त्यत्तिपल्ट पिल्स! युवतीहरु आफ्ना समस्या निर्धक्क भन्दै जान्छन्, ‘प्राइभेट पार्ट’मा चिलायो। दाग देखियो। ब्वाइफ्रेन्डसँग सेक्स भा’थ्यो। पिल्स त खाएँ तर शंका लाइरा’छ। शनिबार, असार २६, २०७८
के वीर्य स्खलनपछि शरीर कमजोर हुन्छ? के लिंग फ्र्याक्चर हुन सक्छ? हो, लिंग फ्रयाक्चर हुन सक्छ। जब लिंगका तन्तुहरु चुडिन्छन्, त्यसलाई पेनाइल फ्र्याक्चर भनिन्छ। विशेषज्ञका अनुसार बढी उत्तेजित भएर गलत ढंगबाट सेक्स गर्दा पेनाइल फ्रयाक्चर हुन सक्छ। बुधबार, असार २३, २०७८
यौन स्वास्थ्य: ४ जिज्ञासा र उत्तर पुरुषको सन्दर्भमा लिंग वरपर उम्रने रौं खौरनु त्यति आवश्यक मानिदैंन, जति महिलाको सन्दर्भमा आवश्यक हुन्छ। महिलाको यौनांगको रौंले सेक्स क्रियामा काफी सहभागिता निर्वाह गर्छ। तर, खौरँदा रौं बाक्लो हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि हुन्छ। बिहीबार, असार १०, २०७८
सम्भोग, उत्तेजना, भ्रम र जान्नैपर्ने पक्ष जब यौनका बारेमा सोचिन्छ वा यौनक्रिया अगाडि हाम्रो सोचाइले मस्तिष्कमा रहेको पिट्युटरी ग्रन्थीबाट उत्तेजनाको सुरुवात हुन्छ, तब हर्मोन सञ्चालन भई हाम्रो यौन अंगलाई उत्तेजित पारी पुरुष र महिलाका यौनांगबाट एक प्रकारको रस निस्कन्छ। शनिबार, चैत २१, २०७७
के कारणले हुन्छ चरम आनन्द नहुने समस्या? यौन समागमको चरम विन्दुमा आनन्द अनुभव नहुने समस्या तुलनात्मक रुपमा महिलाहरुमा बढी देखिन्छ। यसका दुई कारण छन्। शनिबार, फागुन २९, २०७७
सन्तानपछिको यौन जीवन कति सन्तुष्टिपूर्ण? एक अध्ययनमा ९४ प्रतिशतले आफ्नो यौन जीवनबाट पूर्ण सन्तुष्ट रहेको बताए भने ६० प्रतिशतले सन्तान जन्मेपछिको यौन जीवन सुखद हुने बताए। शनिबार, फागुन ८, २०७७
यौन क्षमता बढाउने ६ उपाय तनाव लिँदा शरीरमा कोर्टिसोलजस्ता हर्मोन उत्सर्जन हुन्छ, जसले यौन हर्मोनलाई निस्तेज गरिदिन्छ र यौन क्रीडा चाहेजस्तो हुँदैन। शनिबार, माघ २४, २०७७
के हो सेक्सटोयज? यौनका लागि प्रयोग गरीने कृत्रिम यौन सामाग्रीलाई सेक्सटोयज भनिन्छ। यस्ता सामाग्री पुरुष र महिला दुवैका लागि पाउन सकिन्छ। पुरुष र महिलाका यौन अंगका आकृतिमा पाइने यस्ता सामाग्री ठ्याक्कै लिंग वा यौनी जस्तै हुन्छन्। शनिबार, माघ १०, २०७७
पुरुषको वीर्यमा पनि कोरोना भाइरस, यौन सम्पर्कबाट सर्न सक्ने: अध्ययन कोरोना भाइरस यसरी पनि फैलन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा भने प्रष्ट भइसकेको छैन। प्रजनन अङ्गमा भेटिएका सम्पूर्ण भाइरसहरू यौनजन्य क्रियाबाट सर्छन् नै भन्ने पनि हुँदैन। शुक्रबार, वैशाख २६, २०७७
चार नयाँ घातक यौनरोग : जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतरा समयको विकास क्रमसँगै विश्वका विभिन्न स्थानमा नयाँनयाँ रोगहरु देखिने गरेका छन्। नयाँ रोगको उत्पत्तिले मानव जीवनमा विभिन्न खतरा पनि निम्त्याइरहेको छ। बुधबार, असार ११, २०७६
इजिप्टमा महिलाहरू पनि खान थाले यौन इच्छा बढाउने 'फिमेल भायग्रा' बीबीसीकी स्याली नबिलले इजिप्टजस्तो रूढीवादी देशमा यसको बजार कस्तो छ भनेर बुझेकी छन्। शनिबार, माघ ५, २०७५
‘आउनुहोस्, यतै हो, नलजाउनुहोस्’ समाजलाई यौन रोगप्रति सचेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। युवाहरूमा के सही हो र के गलत हो भन्ने सन्देश दिने खालको कार्यक्रम आमसञ्चारका माध्यममार्फत् दिनुपर्छ। सोमबार, फागुन ४, २०७१
यौन विकृतिको रुप केटा वा केटीमा स्वाभाविक यौन क्रियाकलापमा असन्तुलन हुनु र मनोवैज्ञानिक रुपमा उथलपुथल हुनुलाई मानसिक यौन विकृति भनिन्छ। समाजमा मानसिक यौन विकृतिबाट सताइएका धेरै व्यक्ति हुन्छन्। शनिबार, माघ १८, २०७०
स्तन र सेक्स सामान्यतया स्तनको आकार वा नापलाई विभिन्न कुराले प्रभावित गर्ने गर्दछन्। स्तनमा तन्तुको मात्रा, वंशाणु, पारिवारिक ईतिहास, उमेर, तौल बढ्नु वा घट्नु, स्तनको छालाको मोटाई वा तन्किन सक्ने गुण, रागरस (हर्मोन)हरुको प्रभाव तथा पोषणजस्ता कतिपय कुरामा भर पर्ने गर्छ। शनिबार, साउन १२, २०७०
युवतीमा यौन खुल्दुली किशोरकिशोरी दुवैमा यौनांग र काखीमुनि रौं पलाउनुका साथै पसिना ग्रन्थी सक्रिय भई पृथक खालको गन्ध निस्कन्छ। यसबेला विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुने, हस्तमैथुन गर्ने, यौन चाहना बढ्ने र यौन सम्बन्धी खोजीनीति गर्ने स्वभावको विकास हुन्छ। शनिबार, असार १, २०७०
गर्भावस्था र यौन सम्पर्क पटकपटक गर्भपतन भएकाहरूले गर्भ रहेको सुरूको तीन महिना र अन्तिमको एक महिना यौन सम्पर्क राख्नै हुँदैन। अन्य समयमा सावधानी पूर्वक यौनसम्पर्क राख्न सकिन्छ। शनिबार, जेठ ४, २०७०
महिलाको शत्रु यौनरोग यौनरोगका विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। यसलाई तीन किसिमले हेर्न सकिन्छ। ढुसी संक्रमण, ब्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमण र एचआईभी। ढुसी संक्रमण यौनक्रियाका कारण नभई गर्भवती भएका बेला खाने औषधि वा अन्य रोगका कारण देखिने समस्या हो। यसमा योनी चिलाउने, गन्हाउने पानी बग्ने, पिसाव गर्दा पाल्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन्। शनिबार, चैत ३१, २०६९
हस्त मैथुन, भो नडराऊँ युवायुवतीले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक चरम यौन आनन्द लिने माध्यम नै हस्त मैथुन हो। हस्त मैथुन यति नै पटक गर्न मिल्छ वा गर्नुपर्दछ भन्ने निश्चित मापन छैन। यो व्यक्ति विशेषको यौनेच्छामा भर पर्दछ। शनिबार, फागुन २६, २०६९
प्रथम सम्भोग र कौमार्य झिल्ली प्रथम प्रणय सम्भोगको मधुर कल्पना पनि हुन्छ। पुरुषले प्रथम सम्भोग गर्ने बेला स्त्रीको मन र शरीरका प्रत्येक अंगमा तनाव र मिठास एकै पटक व्याप्त हुन्छ। सम्भोगको प्रमुख अंग योनि, तनावका कारण कहिलेकाही संकुचनको स्थितिमा पुग्छ। शनिबार, माघ २७, २०६९
यौन चरम आनन्द नहुने समस्या बिहीबार, माघ १८, २०६९